ASSCWorkers Voice (AWV)
လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်The Global Alliance for Sustainable Supply Chain (နောင်တွင် ASSC ဟုခေါ်မည်)သည် ASSC ကပေးအပ်မည့်application software ဖြစ်သည့် ASSC Workers Voice (နောင်တွင် AWV ဟုခေါ်မည်)နှင့်ဆိုင်သည့်လူတဦးချင်း၏ သတင်း အချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်ပေါ်လစီကိုအောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဤစာတမ်းတွင်အသုံးပြုထားသည့်ဝေါဟာရများသည် လူတဦးချင်း၏သတင်း အချက်အလက်များကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေ(နောင်တွင် လူတဦးချင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များကိုထိန်းသိမ်းသည့်ဥပဒေဟုခေါ်မည်)နှင့်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ အမိန့်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ASSC သည် မိမိကိုအသုံးပြုသူနေသူက ASSC ကိုတင်ပြလာသည့် လူတဦးချင်း၏သတင်း အချက် အလက်များကို ASSC ကဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအတိုင်းအတာအတွင်းတွင်သာ ဥပဒေနှင့်အညီ သင့်တော်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းများဖြင့် ရယူရမည်။ ASSC သည်မိမိကိုအသုံးပြုနေသူများက AWV ကိုအသုံးပြုကြသည့်အခါ အောက်ပါအတိုင်းသတင်း အချက်အလက်များကိုတင်ပြစေသောအခါမျိုးရှိသည်။
account ကိုဝင်မည့်သူသည်ကာယကံရှင်ဟုတ်မဟုတ်အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ် သည့် passwordစသည့် အခြားသောသတင်းအချက်အလက်များ
ASSCက အပလီကေးရှင်း (သို့မဟုတ်) ဝက်ဆိုက်တွင်ရယူရန်သတ်မှတ်ထားသည့်သတင်းအချက် အလက်များ
ထို့အပြင် ASSCက သတ်မှတ်ထားသည့် အသုံးပြုသူနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက် အလက်များ
(၂) ကွန်ပျူတာ တာမီနယ်သတင်းအချက်အလက်
အသုံးပြုသူသည် ကွန်ပျူတာ တာမီနယ်(သို့မဟုတ်) လက်ကိုင်ဖုန်းတာမီနယ်တွင် AWVကိုအသုံးပြု သည့်အခါ ASSC သည် တာမီနယ်စစ်ဆေးခြင်း Terminal identifierနှင့် Mobile device identifierနှင့် IP address ကိုရယူသည့်အခါမျိုးရှိသည်။ ထို့အပြင် ASSC သည် အသုံးပြုသူ က တာမီနယ်တွင် ပတ်သက်ဆက်နွယ်စေသည့်အမည်၊ တာမီနယ်အမျိုးအစား၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် နိုင်ငံ၊နှင့်အသုံးပြုသည် အမည်၊ (သို့မဟုတ်) အီးမေးလိပ်စာစသည့် အသုံးပြုသူက တင်ပြလာသည့် ကိစ္စ များကို ရွေးချယ်သည့်အပြင်အခြားသောအမျိုးမျိုးသောသတင်းအချက်အလက်များကို ရယူသည့် အခါမျိုးလည်းရှိသည်။
အသုံးပြုသူသည် ကွန်ပျူတာ တာမီနယ် (သို့မဟုတ်) ဖုန်းတာမီနယ်ဖြင့်AWVကိုအသုံးပြုပြီး ထိုနေရာတွင် တည်နေရာ အချက်အလက်ကို တင်ပြခြင်းကို အတည်ပြုသည့်အခါ ASSCသည်အသုံးပြုသူ၏ လက်ရှိနေရာ နှင့်ပတ်သက်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကို ရယူသည့်အခါမျိုးလည်းရှိသည်။
(၄) အသုံးပြုသူ၏ လုပ်ဆောင်မှုဖန်ရှင်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်
အသုံးပြုသူသည် ASSC၏ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနေသည့်အချိန်တွင် ASSCကိုတိုက်ရိုက်တင်ပြ သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့် AWV ကိုတင်ပြနေသည့်တတိယအသုံးပြုသူဝန်ဆောင်မှုအသုံး ပြုနေသူမှတဆင့်တင်ပြသည့်သတင်းအချက်အလက်ကို ASSC ကရယူ၊ထိန်းသိမ်းသည့်အခါမျိုး လည်းရှိသည်။အသုံးပြုသူ၏ AWV အသုံးပြုနေသည့်အခြေအနေ၊ အခြားသောအသုံးပြုသူများ နှင့်ကူးလူးဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရယူသည့်အခါမျိုးလည်း ရှိသည်။
အသုံးပြုသည် AWVတွင် အခြားသောအသုံးပြုနှင့်ဆက်သွယ်မှုပြုပြီး သတင်းအချက်အလက်(TEXT, USER PROFILE, MESSAGE, ဓါတ်ပုံ၊ရုပ်ပုံ၊ အသံ၊ဗီဒီယို၊ အပလီ ကေးရှင်းနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်CONTENT များလည်းပါဝင်သည်)ကို အတူတူရယူကြ မည့် သတ်မှတ်ထားသည့်လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်သည့်အခါ ASSC သည် ထိုသို့သောဆက်သွယ်မှု သတင်းအချက်အလက်များ၏မော်ကွန်းARCHIVE ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး ထိန်းသိမ်းထား သည့်အခါမျိုးရှိသည်။
AWVကို ချဉ်းကပ်သည့်အခါ ASSC သည်အောက်ပါ အထူးသတ်မှတ်ထားသည့်သတင်းအချက် အလက်များကိုရယူသည်။ ASSCနှင့် ASSC၏ကိုယ်စားဖြစ်မည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးအပ်သူသည် LOG FILEနှင့် TREKKING နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီး ကွတ်ကီ၊ အိုင်ပီလိပ်စာ၊ တာမီနယ်အမျိုး အစား၊လက်ကိုင်ဖုန်းတာမီနယ်အမျိုးအစားI DENTIFIERနှင့် browser အမျိုးအစား၊ browser ဘာသာစကား၊ ရည်ညွန်းစာမျက်နှာနှင့်ထွက်သည့်စာမျက်နှာ၊ ပလက်ဖောင်းအမျိုးအစား၊ ကလစ်နှိပ်သည့်ကြိမ်ရေ၊ domain အမည်၊ landing page ကြည့်သည့်စာမျက်နှာအရေအတွက် နှင့်စာမျက်နှာကြည့်သည့်အစီအစဉ်၊ စာမျက်နှာတိုင်း၏URL. အထူးသတ်မှတ်ထားသည့် စာမျက်နှာကို ကြည့်သည့်နာရီပေါင်း၊ application/website အခြေအနေနှင့် ASSC၏ အပလီ ကေးရှင်း(သို့မဟုတ်) ဝက်ဆိုက်တွင် activities ကိုလုပ်ဆောင်သည့်ရက်နာရီ၊ နှင့်အခြားသောသတင်း အချက်အလက်များကိုရယူပြီးသရုပ်ခွဲသည်။ အတွင်းတွင်အသုံးပြုသည့်ရည်ရွယ်ချက်အနေဖြင့် ထိုသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသူ၏ user id number နှင့်ပတ်သက်နေသည့်အခါမျိုး လည်းရှိသည်။ထို့အပြင် ASSC သည် (၁)အထူးသတ်မှတ်ထားသောစာမျက်နှာကို ဝင်ကြည့် ခြင်းရှိ/မရှိ၊(သို့မဟုတ်)မေးလ်ကိုဖွင့်ကြည့်ခြင်းရှိမရှိကိုအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်Web beacon (၂)အထူးသတ်မှတ်ထားသော ပရိုမိုးရှင်းမက်ဆေ့ကစ၍ ရှိနေပြီးသော အသုံးပြုသူကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ အသစ်လာ၍ အင်စတောလုပ်သောနေရာကို အထူးသတ်မှတ်မည်။ (သို့မဟုတ်)အခြားသောဝက်ဆိုက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူများကို ကြေငြာတင်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန် သည့်အကျိုးရှိစေသည်ကြေငြာဖြစ်လာစေနိုင်မည့် Tracking pixel အပါအဝင်အခြားသောနည်း ပညာများကိုအသုံးပြုသည့်အခါမျိုးလည်းရှိသည်။
(၇) ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူတူပူးပေါင်းခြင်းဖြင့် ရယူသည့်သတင်းအချက်အလက်
ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသူကအသုံးပြုသည့် ID နှင့်အခြားပြင်ပဝန်ဆောင်မှုတို့၏ PRIVACY SETTINGအရ အသုံးပြုသူက ပူးတွဲဆောင်ရွက်နေသည့်သူကို ဖော်ပြခြင်းကိုအတည်ပြုသည့် သတင်းအချက်အလက်ကိုရယူသည့်အခါမျိုးလည်းရှိသည်။
ASSC သည်အသုံးပြုသူထံမှ ASSCသို့တင်ပြစေသောတဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍အောက်ပါအသုံးပြုသည့်ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအတာအတွင်း(သို့မဟုတ်)ရယူသောအခြေအနေမှာ ထင်ထင်ရှားရှားရှိနေသည့်အသုံးပြုသည့်ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအတာအတွင်းတွင်သာ အသုံးပြုရန်၊ အသုံးပြုသူကသဘောတူသည့်အခါ APPLICATION ၏ဝန်ဆောင်မှုစည်းကမ်းများ ကိုသီးခြားသတ်မှတ်ထားသည့်အခါ (သို့မဟုတ်)ဥပဒေအမိန့်တို့ဖြင့်အတည်ပြုထားသည့်အခါမျိုးမှ လွဲ၍အခြားရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အသုံးမပြုရ။
(၁) စက်ရုံ၊ ဆိုင်၊ရုံးနှင့်အခြားသောနေရာများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့်သူများနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည့်ရည်ရွယ်ချက်
အလုပ်လုပ်သည့်နေရာတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသတင်းအချက် အလက်များကိုစုစည်းခြင်း
(၂) အသုံးပြုသူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့်အဖွဲ့ (နောင်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့်အဖွဲ့ဟု ခေါ်မည်)၊ ထိုသို့လုပ်ငန်းဆက်ဆံသည့်နေရာ(နောင်တွင်လုပ်ငန်းဆက်ဆံသည့်နေရာဟုခေါ်မည်) နှင့် အတူတူလုပ်ငန်းရှိသည့်အခြားကုမ္ပဏီ(နောင်တွင် လုပ်ငန်းတူအခြားကုမ္ပဏီဟုခေါ်မည်)နှင့် ပတ်သက်သည့်တဦးချင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည့်ရည်ရွယ်ချက်
အသုံးပြုသူ အလုပ်လုပ်သည့်နေရာ၏အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းခြင်း၊ သုတေသနလုပ် ခြင်း၊သရုပ်ခွဲခြင်း
အသုံးပြုသူ အလုပ်လုပ်သည့်နေရာတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များကိုစုစည်းခြင်း
အသုံးပြုသူ အလုပ်လုပ်သည့်နေရာတွင် ဘေးကင်းကြောင်းစစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း
သင့်တော်ပြီး ချောမွေ့သည့် ဆက်သွယ်မှု •	ဂျာနယ်၊ ဝက်ဆိုက်များတွင်တင်ခြင်း
ASSC သည်တဦးချင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သည့်ကုမ္ပဏီကိုအပ်နှံသည့်အခါမျိုးလည်းရှိသည်။ သို့သော်အပ်နှံသည့်တဦးချင်းသတင်းအချက် အလက်မှာအပ်နှံသည့် အလုပ်တာဝန်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် လိုအပ်သလောက် အတတ်နိုင်ဆုံးချုံ့ထားသည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုသာသတ်မှတ်ရမည်။
ASSC သည်အသုံးပြုသူက ကြိုတင်ပေးထားသည့်သဘောတူညီချက်ကိုရထားပါက (သို့မဟုတ်)ဥပဒေအမိန့်များတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အခါမျိုးမှလွဲ၍ တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက် များကိုတတိယသူ (အလုပ်အပ်နှံသည့်သူမပါ)ကိုမတင်ပြရ။
ASSC သည်တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်များသတ်မှတ်ထားသောသူနှင့်အတူတကွအသုံးပြု သည့်အခါတွင် ကြိုတင်၍ အသုံးပြုသူကိုအကြောင်းကြားခြင်း(သို့မဟုတ်) အသုံးပြုသူ သိထားပြီးစေသော အနေအထားမျိုးဖြစ်ရမည်။
ASSC သည် တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုဂျပန်နိုင်ငံမဟုတ်သည့်အခြားသောနိုင်ငံမှ ASSC ၏ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းရှိရုံးသို့လွှဲပေးသည့်အခါမျိုးရှိတတ်သည်။ EU နှင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံ နယ်မြေ ပရဝဏ် အတွင်း ရှိသည့် စက်ရုံ၊ဆိုင်၊ရုံး၊ အခြားသောနေရာထံမှ ASSC ၏ဂျပန်နိုင်ငံတွင်း တွင်ရှိသည့်ရုံးသို့တဦးချင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုပြောင်းရွေ့သည့်အခါ ဂျပန်နိုင်ငံ က ရယူထားနိုင်သည့်ကြီးမားသည့်ဖြစ်နိုင်ခြေကို အတည်ပြုသတ်မှတ်ပြီးအခြေခံရမည်။ ASSC သည်EU နှင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံ နယ်မြေ ပရဝဏ်အတွင်းမှ ကြီးမားသည့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအတည် ပြု သတ်မှတ်ပြီးတင်ပြလာခြင်းကိုလက်ခံရရှိသည့်တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်များကို နိုင်ငံခြားတွင်ရှိသည့် တတိယသူကိုပေးပို့မည့်အခါ အောက်ပါ(၁)မှ(၃)ဖော်ပြချက်တခုခုနှင့် တိုက်ဆိုင်သည့်အခါမျိုးမှလွဲ၍ ကာယကံရှင်၏သဘောတူညီချက်နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သည့်ရွေ့လျားရောက်ရှိသွားမည့်နေရာ၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍သတင်းအချက်အလက်ကိုတင်ပြပြီးနောက် ကြိုတင်၍နိုင်ငံခြားတွင်ရှိသည့်တတိယ သူသို့ တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေးပို့မည့်အကြောင်းကို ကာယကံရှင်၏သဘော တူညီချက်ကိုရယူရန်လိုအပ်သည်။
(၁) သက်ဆိုင်သည့်တတိယသူသည် တဦးချင်းအကျိုးစီးပွားကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်တန်းတူအဆင့်အတန်းရှိသည်ဟုအသိအမှတ်ပြုခံရသည့်တဦးချင်းသတင်းအချက် အလက်များကိုထိန်းသိမ်းသည့်စနစ်ကိုရှိနေသည့်နိုင်ငံအဖြစ်စည်းမျဉ်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည့်အခါမျိုးတွင်
(၂)တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုကိုင်တွယ်သည့်လုပ်ငန်းရှင်နှင့်တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်ကို တင်ပြခြင်းကိုလက်ခံမည့်တတိယသူအကြားတွင် သက်ဆိုင်သည့်တတိယလူက တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုကိုင်တွယ်မည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်တော်ပြီးယေဘူယျ ကျသည့်နည်းလမ်း (စာချုပ်၊ အခြားသောပုံစံဖြင့်နှောင်ဖွဲ့မှုကိုသတ်မှတ်ထားခြင်း(သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းအုပ်စုတွင်ထားရှိသည့် ချုပ်နှောင်ထားသည့် ကိုင်တွယ်သည့်နည်းလမ်း)ဖြင့် တဦးချင်း သတင်းအချက်အလက်ကိုထိန်းသိမ်းသည့်ဥပဒေနှင့်အလားတူစံနှုန်းရှိသည့်တဦးချင်းသတင်း အချက်အလက်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည် အစီအမံကိုအတူတကွလုပ်ဆောင်ထား သည့်အခါမျိုးတွင်
(၃) တဦးချင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းသည့်ဥပဒေပုဒ်မ၂၃အပိုဒ်(၁)နှင့်ကိုက် ညီသည့်အခါမျိုးတွင်
(၁)	အချက်အလက်အကြောင်းအရာကို မှန်ကန်တိကျစွာအတည်ပြုထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း
ASSC သည်တဦးချင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်၍အသုံးပြုသည့်ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်ရန်အတွက်လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာအတွင်း မှန်ကန်တိကျသော နောက်ဆုံးဖြစ်သည့် အတိုင်းအတာအတွင်း ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည့်အပြင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်ချက်မရှိတော့သည့်အခါ သက်ဆိုင်သည့်တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်များကို ဖျက်ဆီးပစ်ရန်တာဝန်ယူရမည်။
ASSC သည် တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်ပေါက်ကြားခြင်း၊ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အခြားသော ဘေးကင်းသည့်စီမံခန့်ခွဲထားရှိမှုဖြစ်စေရန် အတွက် လိုအပ်သည့်အတိုင်းသင့်တော်သည့်စီမံထားရှိမှုမျိုးပြုလုပ်ရမည်။
ASSC သည် တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်များကို ဝန်ထမ်းများကိုကိုင်တွယ်အသုံးပြုစေသည့် အခါ တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်များကို သင့်တင့်မှန်ကန်သည့်ကိုင်တွယ်မှုဖြစ်စေရန်အားလုံးကို သိရှိနေစေရန်အတွက်သင့်တော်မှန်ကန်စွာသင်ကြားပေးခြင်း၊ လိုအပ်ချက်အတိုင်းသင့်တော်မှန်ကန် သည့်ကြီးကြပ်မှုကိုဆောင်ရွက်ရမည်။
ASSC သည် တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်အသုံးပြုရန်အပ်နှံသည့်အခါ အလုပ်အပ်နှံခံရသည့်နေရာတွင် သင့်တော်မှန်ကန်ပြီးဘေးကင်းသည့်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအမံများ ထားရှိရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့်ကုမ္ပဏီကိုကောင်းစွာရွေးချယ်ရမည်။ အလုပ်အပ်နှံသည့် နေရာ ကို လိုအပ်သည့်အတိုင်းသင့်တော်မှန်ကန်သည့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုကိုဆောင်ရွက်ရမည်။
၉ အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းprocessing အကြောင်းရင်းများ
ASSC သည်ဥပဒေနှင့်ညီသောအကြောင်းရှိမှသာတဦးချင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို စုစည်းခြင်းနှင့်အသုံးချခြင်းပြုမည်။ ဥပဒေနှင့်ညီသောအကြောင်းဆိုသည်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
(၁)	အသုံးပြုသူက ၄င်း၏ကိုယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကို process လုပ်ရန် သဘောတူညီချက်ပေးသည့်အခါ
(၂) AWV၏ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးအပ်ပြီးအသုံးပြုခြင်းရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအောင်မြင်စေရန်အတွက် ပြုလုပ်ရန် process လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ
(၃) ASSC ကလိုက်နာရမည့်ဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားသည့်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် process လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ
(၄) ASSC (သို့မဟုတ်)တတိယသူဖြင့် စူးစမ်းရသော သင့်တော်မှန်ကန်သည့်အကျိုးအမြတ်ရရှိရန်အတွက် process လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ။ (သင့်တော်မှန်ကန်သည့်အကျိုးအမြတ်)ဆိုသည်မှာတဦးချင်း ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် တတိယစည်းကမ်းပါ အသုံးပြုသည့်ရည်ရွယ် ချက်ကိုအထမြောက်စေပြီးသည့်အပြင်သတင်းအချက်အလက်ကိုစုစည်းခြင်း၊ အသုံးပြုသည့် ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင်အကျိုးပြုသည့် အခါမျိုး ရှိသည်။ သို့သော်အသုံးပြုသူအထူးသဖြင့် ကလေးများကအချက်အလက်အကြောင်းအရာများ ဖြစ်သည့်အခါ တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုတောင်းဆိုနေသည့်အခြေခံကျသည့် အခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်မှာသက်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးထက်ိုဦးစားပေးရမည့်အခါမျိုးမပါပါ။
(၅) အများဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်(သို့မဟုတ်) ASSC တွင်ပေးအပ်ထားသည့်အများဆိုင်ရာအခွင့်အရေး ကန့်သတ်ချက်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုထမ်းဆောင် ရန်အတွက် process လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ
(၁)	အသုံးပြုသူ(သို့မဟုတ်)ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ ထိန်းသိမ်းထားသည့်တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက် များကိုအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ချက်ကိုအသိပေးခြင်းကိုတောင်းဆိုလာသည့်အခါ အောက်ပါကိစ္စများမှ လွဲ၍ အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားပေးရမည်။
(က) အသုံးပြုသူကိုခွဲခြားနိုင်သည့်ထိန်းသိမ်းထားသည့်တဦးချင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကို အသုံးပြုသည့်ရည်ရွယ်ချက်မှာထင်ထင်ရှားရှားရှိသည့်အခါ
(ခ) အသုံးပြုသူ(သို့မဟုတ်)တတိယသူ၏အသက်ခန္ဓာ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အခြားရပိုင်ခွင့်အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေ နိုင်သည်ဟုစိုးရိမ်ရသည့်အခါ
(ဂ) ASSC၏ရပိုင်ခွင့်(သို့မဟုတ်) တရားနည်းလမ်းကျသည့်အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေ နိုင်သည်ဟုစိုးရိမ်ရ သည့်အခါ
(ဃ) နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများ၊ဒေသန္တရအဖွဲ့အစည်းများကဥပဒေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောလုပ်ငန်း များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ၊ သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်နှောင့်နှေးအခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုစိုးရိမ်ရသည့် အခါ
(၂) အသုံးပြုသူ(သို့မဟုတ်)ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ ပိုင်ဆိုင်သည့်တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်ကို ဖော်ပြရန် တောင်းဆိုလာသည့်အခါအောက်ပါကိစ္စများမှလွဲ၍ အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားရမည်-
(က) အသုံးပြုသူ(သို့မဟုတ်)တတိယသူ၏အသက်ခန္ဓာ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အခြားရပိုင်ခွင့်အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေ နိုင်သည်ဟုစိုးရိမ်ရသည့်အခါ
(ခ) ASSC ၏လုပ်ငန်းများကိုသင့်တင့်မှန်ကန်စွာအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်သိသာသည့် အခက်အခဲနှောင့်နှေးမှုများဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုစိုးရိမ်ရသည့်အခါ
(၃) အသုံးပြုသူ(သို့မဟုတ်)ကိုယ်စားလှယ်ထံမှပိုင်ဆိုင်သည့်တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုပြင်ဆင် ခြင်း၊ နောက်ထပ်ထည့်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းပြုပေးရန်တောင်းဆိုလာသည့်အခါ အမြန်ဆုံးစစ်ဆေးမှုလုပ်ပြီး တွေ့ရှိချက်ရလာဒ်ကိုအခြေခံပြီး လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ အသုံးပြုသူကိုဆက်သွယ်ရန်လို အပ်သည်။
(၄) အသုံးပြုသူ(သို့မဟုတ်)ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ ပိုင်ဆိုင်သည့်တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးပြု ခြင်းမှ ရပ်တန့်ရန်(သို့မဟုတ်)ဖျက်သိမ်းပေးရန်တောင်းဆိုလာသည့်အခါ တောင်းဆိုသည့်အကြောင်းရင်း ရှိကြောင်းထင်ရှားသည့်အခါ လိုအပ်သည့်အတိုင်းသင့်တော်မှန်ကန်စွာတုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
(၅) အသုံးပြုသူ(သို့မဟုတ်)ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ ပိုင်ဆိုင်သည့်တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်ကို process လုပ်ရာတွင်ကန့်သတ်မှုပြုရန်တောင်းဆိုလာသည့်အခါ လိုအပ်သည့်အတိုင်းသင့်တော်မှန်ကန်စွာ တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
(၆) အသုံးပြုသူ(သို့မဟုတ်)ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ ပိုင်ဆိုင်သည့်တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပြီး၊ယေဘူယျအသုံးပြုခြင်း(သို့မဟုတ်)စက်ဖြင့်ဖတ်ယူနိုင်သည့်ပုံစံဖြင့်လက်ခံရယူရန်တောင်းဆို လာသည့်အခါ လိုအပ်သည့်အတိုင်းသင့်တော်မှန်ကန်စွာတုံပြန်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ထို့အပြင်၊ အသုံးပြုသူ(သို့မဟုတ်)ကိုယ်စားလှယ်က သက်ဆိုင်ရာဒေတာကို ASSCကစွက်ဖက်ခြင်းမလုပ်ဘဲအခြားသော စီမံခန့်ခွဲသူများကို သဘောတူစေနိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိသည်။
(၇) အသုံးပြုသူ(သို့မဟုတ်)ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ ASSC(သို့မဟုတ်)တတိယသူကစူးစမ်းမှုပြုလုပ်သည့်တရားမျှတ သည့်အကျိုးအမြတ်ရရှိရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် processလုပ်ရန်လိုအပ်ချက်ကိုအခြေခံပြီး ကိုယ်ပိုင် တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်ကို process လုပ်ခြင်းကိုကန့်ကွက်ပြောကြားလာသည့်အခါ လိုအပ်သည့်အတိုင်းသင့်တော်မှန်ကန်စွာ တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
(၈)	အသုံးပြုသူသည် အသုံးပြုသူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေအရအကျိုးမြတ်ကိုရရှိစေမည် လား၊ (သို့မဟုတ်)သက် ဆိုင်သည့်အသုံးပြုသူကိုအလားတူကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်စေမည့် ပရိုဖိုင်းရင်းprofiling စသည့် automated process ကိုသာအခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မလိုက်နာနိုင် သည့်အခွင့်အရေး ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
(၉) နောက်ဆုံးအပိုဒ်(၈)တောင်းဆိုသည့်အခါ (၁၀)တွင်ဖော်ပြထားသည့် မိမိကုမ္ပဏီ၏လက်ခံ ကောင်တာသို့ရောက်အောင်ပို့ပေးပါ။ တင်ပြရရှိထားသည့်တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်မှာ အသုံးပြုသူထံမှတောင်းဆိုချက်အတိုင်း တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အသုံးပြုပြီး၊ တိတိ ကျကျထိန်းသိမ်းထားရမည်။ တောင်းဆိုသည့်စာနှင့်ပူးတွဲပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြန်ပို့ခြင်းလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းသိထားစေလိုပါသည်။
ASSC သည်ဥပဒေအမိန့်များကိုအခြေခံ၍တဦးချင်း၏သတင်းအချက်အလက်များကိုခွဲခြားခြင်း နှင့်တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်များကို မူရင်းအတိုင်းပြန်မလုပ်နိုင်သည့်သင့်တော်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် process လုပ်ပြီး သတင်းအချက်အလက်အတုအယောင်များကို ရယူပြီး သရုပ်ခွဲခြင်း၊ သရုပ်လေ့လာခြင်း၊ စူးစမ်းခြင်းစသည်တို့ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်အရလိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာ အတွင်းတွင်သာ သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များသည် သတင်းအချက်အလက်အတုအယောင်များဖြစ်ကြောင်းကို အသိပေးကြေငြာပြီးနောက် ၄င်းတို့ကို တတိယသူကို ဆက်လက်ပေးအပ်သည့်အခါမျိုးရှိနိုင်သည်။ EU(သို့မဟုတ်) ဗြိတိန်နိုင်ငံများနယ်မြေအတွင်းမှ လုံလောက် သည့် သရုပ်ခွဲခြင်းကိုအခြေခံပြီးပေးအပ်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိသည့်တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက် များနှင့်ပတ်သက်၍ ASSCက process နည်းလမ်းစသည့်သတင်းအချက်အလက် (သတင်းအချက်အလက်အတုအယောင်များပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက် များထဲမှ ဖျက်လိုက်သည့် ဖော်ပြချက်နှင့်တဦးချင်းခွဲခြားနိုင်သော personal identification code နှင့် process လုပ်သည့်နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်(ထိုသတင်းအချက် အလက်ကိုအသုံးပြု၍သက်ဆိုင်သည့်တဦးချင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုမူရင်းပြန်လုပ်နိုင်သည့် ကိစ္စများအတွက်သာ)ဟုခေါ်မည်)ကိုဖျက်လိုက်ခြင်းဖြင့် (အတုအယောင်စနစ်ဖြင့် တဦးချင်းကို နောက်တကြိမ်ခွဲခြားခြင်းကိုမည်သူ့အတွက်မှမဖြစ်နိုင်ဟုဆိုမည်။ တင်ပြမည့်သတင်းအချက်အလက်အတုအယောင်များပါနေသော တဦးချင်းနှင့်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက် အလက် အကြောင်းအရာနှင့် သတင်းအချက်အလက်အတုအယောင်များကိုတင်ပြသည့် နည်းလမ်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(၁) သတင်းအချက်အလက်အတုအယောင်များရေးသားခြင်း ကျား/မ ၊အသက်ဆိုင်ရာအချက်အလက် ဆွေးနွေးလာသည့်ကိစ္စနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်
(၂) တတိယသူကိုတင်ပြသည့် သတင်းအချက်အလက်အတုအယောင်
၁) တတိယသူသို့တင်ပြသည့် သတင်းအချက်အလက်အတုအယောင်တွင်ပါဝင် သည့်တဦးချင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်အကြောင်းအရာ ကျား/မ ၊အသက်ဆိုင်ရာအချက်အလက် ဆွေးနွေးလာသည့်ကိစ္စနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်
၂) သတင်းအချက်အလက်အတုအယောင်ကိုတင်ပြသည့်နည်းလမ်း သင့်တော်သည် access စီမံခန့်ခွဲမှုကိုဆောင်ရွက်နေသည့် server၊ တဦးချင်း၏မေးလ်၊ ထို့အပြင်စာတိုက်မှပေးပို့ခြင်း၊ အမြန်ချောပို့ဖြင့်ပေးပို့ခြင်း
ASSC သည်အသုံးပြုသူက account ကိုပိုင်မှသာလျှင် အသုံးပြုသူ၏တဦးချင်းအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းထားမည်။ ASSC သည် account ဖျက်ပေးရန်တောင်းဆိုခံသည့်နောက်ပိုင်းတွင်လည်း ဘေးကင်းမှုနှင့်မမှန်မကန်လုပ်မှုကိုကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လိုအပ်ချက်အရ သတ်မှတ်ထား သည့်အသုံးပြုသူ၏အချက်အလက်များကိုထိန်းသိမ််းထားခြင်းမျိုးရှိနိုင်သည်။
လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်The Global Alliance for Sustainable Supply Chain ASSC WORKERS VOICE　ရုံးခန်း 〒211-0006 Shin Maruko Room 202, Towa City Corp., 1-653-7, Maruko-dori, Nakahara-ku, Kawasaki City, Kanagawa Prefecture, Japan. TEL: 044-982-1967 (Representative) Telephone reception hours: 9:00 to 17:00 (စနေ၊တနင်္ဂနွေ၊အမျိုးသားရုံးပိတ်ရက်နှင့် ကုမ္ပဏီပိတ်ရက်များမပါ) Email: voice.office@g-assc.org
ASSC သည်ဤပေါ်လစီပါအကြောင်းအရာများကိုသင့်တော်သလိုပြန်လည်သုံးသပ်၍ လိုအပ်ချက်များ အရပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းများရှိသည်။ ထိုအခါမျိုးတွင်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာသည့်ရက်မှစ၍၄င်းပရိုက်ဗစီပေါ်လစီကို ကျင့်သုံးကြရပါမည်။ ပြဌာန်းရက် ၃-၇-၂၀၂၀